Nethezeka esikhungweni somlando - I-Airbnb
Nethezeka esikhungweni somlando
Pietrasanta, Toscana, i-Italy
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Ornella
U-Ornella Ungumbungazi ovelele
Igumbi elizimele le-en-suite elinengadi enhle, enkabeni yomlando yase-Pietrasanta. Ikamelo linekhishi elincane kanye netafula lokudlela futhi. Ingadi iza nezihlalo zompheme ukuze uphumule ngokugcwele. Ukupaka kuyatholakala mahhala esizeni. Ulwandle luqhele ngamakhilomitha amathathu kuphela!
Ifulethi le-studio, enkabeni ye-Pietrasanta, lingamamitha-skwele angu-23 futhi lihlanganisa umbhede ophindwe kabili (140cm / 55in ububanzi), igumbi lokugezela elineshawa encane, itafula lokudlela kanye nekhishi elincane. Konke kwenziwa ngezinto zokwakha ezinobungani bemvelo. Ngokuhlala isikhathi eside, ngishintsha amathawula njalo ezinsukwini ezine kanye nokulala masonto onke. Ukuhlanza kwansuku zonke kuxhomekeke kwisivakashi.
Ingadi ehlukanisa isitudiyo nesakhiwo esikhulu futhi iyatholakala ukuze isetshenziswe izivakashi zethu kuphela. Iza netafula lokudlela kanye nezihlalo zedekhi, ukuze uthole umuzwa ogcwele wokuphumula.
Ulwandle luqhele ngamakhilomitha angu-4 futhi lungafinyelelwa kalula ngebhayisikili, izithuthi zomphakathi noma imoto (sinendawo yokupaka yamahhala). Uma ungaphezu kwezintaba, indlu iseduze kwamagquma azungeze iPietrasanta.
Uma ungathanda iseluleko, ngiyajabula ukukusiza futhi ngincoma ukuthi wenzeni nokuthi ungadla kuphi - ngesiNgisi nangesiFulentshi.
Uma kwaziswa kusenesikhathi, amahora okungena angahlaliswa ukuze ahambisane nezidingo zakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pietrasanta namaphethelo